Wefti Ka Soco day Xukuumada Somaliland Oo Gaadhay Magaalada Laascaanood + Deeq Halkaasi Ay Gaadh Siiyeen | Raadgoob
Wefti Ka Soco day Xukuumada Somaliland Oo Gaadhay Magaalada Laascaanood + Deeq Halkaasi Ay Gaadh Siiyeen
-Wefti Balaadhan oo uu hogaaminayo Wasiirka Arimaha Gudaha ayaa soo gaadhey magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool, si ay qayb uga noqdaan dadaalka lagu joojinayo colaad ka taagan koonfurta degmada Laascaanood.
Gudoomiyaha gobolka Sool oo soodhoweynta ka dib la hadlay saxaafada ayaa waxa uu yidhi “horey waxaa u joogey xubno ka socdey Golaha Guurtida, haatana waxaa inoo yimi wasiiro ay ka mid yihiin Wasiirka Arimaha Gudaha, Wasiirka Biyaha, Wasiirka Golayaasha,
W. Ku Xigeenka Warfaafinta iyo masuuliyiin kale oo dhamaantood diyaar u ah sidii ay salka ugu dhigi lahaayeen Nabad Waarta”.
Dhinaca kale waxaa raashin iyo alaabooyin kala duwan loo qaybiyey dadkii ay colaadu barakicisay oo dhibaato bini’ aadaninimo haysey mudooyinkii la soo dhaafay.
Deeqdan oo ah tii ugu horeysey ee dadkan soo gaadha marka laga reebo deeq dhawaan ay soo gaadh siiyeen Dawlad degaanka Itoobiya, taas oo ka koobnayd Raashin, iyo teendhooyin iyo agab kale oo muhiim u dadkan dhiban.
Halkan Hoose Ka Eeg Sawirada Deeqda Dadka La Soo Gaadh siiyay